Navy Russian isungule kusukela esikhathini Petra Velikogo, futhi kuye kwaba isihloko Ukuziqhenya esikhethekile isimo nabakhileyo kuyo njalo, ngakho ngoSuku Navy futhi wenziwa ama solemnity okukhulu. Ikakhulukazi ukugubha ngokukhazimulayo lalolusuku esiqhutshwa Sevastopol - idolobha, okuyinto ongenakuzihlukanisa emlandweni Sea Fleet, futhi nakuba Russia nase-Ukraine baye baba uthi ahlukene, emikhosini ubuhanjelwe kokubili Russian futhi Ukraine.
Umlando: njengoba emcimbini okhethekile we Day Navy kugujwa kwamaSoviet, kusukela ngo-1939, futhi kakhulu imikhosi ngokwesiko labetibambile emashumini eminyaka ambalwa ilandelana-July ngeSonto eledlule. Kusukela ngo-1980, lo mcimbi ukuthi ayafana ngokuphathelene ukuthi leli holidi professional, aphethwe ngesisekelo Isinqumo we KaHulumeni of the Supreme Soviet, futhi ngemva kokuwa kweSoviet Union ukuze WaseRussia esungulwe Russian Navy ngoSuku lukaMandela, kwaba phambili isiko Soviet.
Manje Navy Day ukubingelela izikhulu yemikhumbi yempi wezempi, abakhonza Navy etholakele nezicukuthwane. Ngo-2006, kusho uNdunankulu uVladimir Putin ngesikhathi ukugubha onesizotha kuqashelwe ukuthi le usuku okusikhumbuza izakhamuzi Russian Federation enkazimulweni zasolwandle isimo isiRashiya, kanti imikhumbi edumile, sibonga abantu, nakuba okwamanje ezweni akwanele ngwenya emisha kanye nemikhumbi. Iqhaza okusezingeni eliphezulu kakhulu ekuthuthukeni Russian Navy e 2009 ubeke Dmitry Medvedev ekuyi uhalalisele amaqhawe isikhathi. Wathi manje ovula izilwandle ngemikhumbi oluhle ngemikhumbi yempi, lapho ensikeni yaso ngeqholo eba ifulege Andrew, ngempumelelo lucwaningo imisebenzi eyinkimbinkimbi futhi enesibopho.
Abanye abacwaningi baye exhumene emlandweni Navy Russian nge nekhambo, ebanjwa eByzantium lesiprofetho Prince Oleg at the stage of kumiswa Kievan Rus ', nakuba ngaleso sikhathi flotillas Slavic Yayinesikhwanyana ngaphezulu Ehlasela nezikebhe-odnoderevok. ukuqhubeka ngoxhaxha ngenxa Fleet "We-seagull" kanye Don Cossacks, uzule umcengezi Azov-Black Sea, efana Sebawoti, nakuba esifundeni ke wabusa Turkey. Kodwa kuphela ngo-1714, lapho uPeter Omkhulu ngesikhathi belwa ulwandle wakwazi ukunqoba abaseSweden eCape Hanko, ababusi European baphoqeleka ukuba siqonde amandla nascent imikhumbi yaseRussia.
Celebration: eminyakeni yamuva Russian Navy Day emadolobheni kugujwa ngezinga elikhulu, futhi emadolobheni asogwini labetibambile ezemidlalo lempi, yamathanga zezempi amakhonsathi agqamile emnandi. Ngo amadolobha asogwini, umlando okuyinto exhumene ngokuqondile imikhumbi, olwenziwa lihlala ukuphila kokubili emanzini nasezweni, futhi kusihlwa iziqhumane ezimibalabala sengathi besika ebumnyameni ebusuku esibhakabhakeni.
Izivakashi uphiwa zonke izinhlobo imicimbi kanye ezihlukahlukene evumelanisiwe Imibuzo imincintiswano, futhi ngokuvamile zesimanje yempi abagqugquzeli bahlele uhlobo "open day" ngoba nezakhamuzi. A amaphoyisa asolwandle lokuqala ulalele siyakuhalalisela kusukela abamele uhulumeni kanye gaba yemikhumbi, futhi abanye ngalolo suku eyiziqu kokuvamile imiklomelo esibalulekile ngezinkonzo zakhe ukuze izwe lakhe.
Holiday e-Ukraine: e-Ukraine Usuku Navy, kanye eRussia, kusukela ngo-1993 lugujwa minyaka yonke, kodwa ekuqaleni owabanjwa mhlaka 29 Juni. Ngo-2008, uMongameli Viktor Yushchenko postpones Umkhosi on December 30, khona-ke iholidi zochwepheshe bakahulumeni kanye nabasebenzi Navy Navy kugujwa kanyekanye. Kakade 2012, umongameli VF Yanukovych owenze ushintsho emthethweni Ukraine, abameleli we Navy eRussia nase-Ukraine ungase ukugubha iholide acacile nangenakulibaleka ndawonye.
Yini ukunikeza intombazane engu 30: ukhethe samanje